Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Scissor | Warshadda Qaadista Scissor ee Shiinaha
Wiishka maqaska gacanta lagu dhaqaajin karo wuxuu ku habboon yahay howlaha sare, oo ay ku jiraan rakibidda sare ee qalabka, nadiifinta muraayadaha iyo samatabbixinta joogga sare. Qalabkeenu wuxuu leeyahay qaab dhismeed adag, hawlo hodan ah, wuxuuna la jaanqaadi karaa deegaanno kala duwan oo shaqeeya.
Wiishka maqaska ee iskiis u wada waa qalab aad u hufan. Shaqaaluhu waxay si toos ah ugu istaagi karaan barxadda si ay u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa iyo qaadista qalabka. Iyada oo loo marayo qaabkan hawlgalka, looma baahna in hoos loo dhigo sagxadda dhulka markii shaqada moobiilku socoto ...
Muuqaalka ugu weyn ee dhul-gariirka maqaska wiishka leh ee iskiis u riixaya ayaa ah inuu la qabsan karo jawiga adag ee adag ee shaqada. Tusaale ahaan, boholaha ku yaal goobaha dhismaha, goobaha shaqada ee dhiiqada leh iyo xitaa lamadegaanka Gobi.
Kala duwanaanta udhaxeysa maqaska wiishka ee korontada ku shaqeeya iyo korantada wiishka korontada ayaa ah in midka uu adeegsado nidaamka haydarka si uu u dhaqaajiyo giraangirta, mid kalena wuxuu adeegsadaa matoor koronto oo ku rakibaya mootada si uu wiishku u dhaqaaqo.
Mini wiishka wiishka wiishka leh waa mid is haysta oo leh gacan yar oo leexinaysa meel cidhiidhi ah.Waa iftiin, macnaheedu waa waxa loo isticmaali karaa dabaqyada miisaanka leh ee xasaasiga ah. Madalku waa waasac oo ku filan inuu qabto laba ilaa saddex shaqaale waana loo isticmaali karaa labadaba gudaha iyo bannaanka.
Qalabka wiishka yar yar ee moobiilka ayaa inta badan loo adeegsadaa hawlgallada joogga sare ee gudaha, dhererkiisuna ugu badan wuxuu gaari karaa 3.9 mitir, kaas oo ku habboon hawlgallada sare ee dhexdhexaadka ah. Waxay leedahay cabir yar waxayna u dhaqaaqi kartaa kana shaqeyn kartaa meel cidhiidhi ah.